नयाँ कम्पनी थपिएपछि फस्टाउँदै बीमाबजार | गृहपृष्ठ
Home वार्षिकोत्सव बिशेष नयाँ कम्पनी थपिएपछि फस्टाउँदै बीमाबजार
गत आर्थिक वर्ष (आव)मा नौओटा जीवन बीमा कम्पनी थपिएपछि बीमाबजार फस्टाउँदै गएको पाइन्छ । यसबाट पछिल्लो समय बीमाबजारको पहुँच र दायरा पनि बढ्दै गएको छ । अघिल्लो आव २०७२/७३ मा कुल जनसङ्ख्याको ७ प्रतिशतमा रहेको बीमाको पहुँच गत आवमा ११ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
पुराना कम्पनीले भन्दा नयाँले उल्लेखनीय रूपमा शाखा विस्तार गरेको बीमा समितिले बताएको छ । समितिका अनुसार नयाँ कम्पनीहरूको मात्र ४ सयभन्दा बढी शाखा रहेका छन् । नियामक निकायको कार्यशैली र नयाँ कम्पनी थपिएकाले यस्तो सफलता मिलेको समितिको भनाइ छ । केही महीनाअघि सञ्चालनमा आएका तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि बीमाबजारमा थप टेवा पु¥याउने समितिको विश्वास छ ।
नेपालमा हाल १ पुनर्बीमा, १८ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कम्पनीको सङ्ख्या थप भएसँगै बढ्दो प्रतिस्पर्धाले शहरमुखी बीमा कम्पनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान थालेको समितिको ठहर छ । समितिका अनुसार ७७ ओटै जिल्लामा जीवन बीमा कम्पनीका शाखा स्थापना भइसकेका छन् । यसले बीमा जागरण बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने समितिको विश्वास छ ।
समितिको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभर सबै जीवन बीमा कम्पनीका १ हजार ३८ शाखा छन् । ती शाखामा करीब ३ हजार ४ सय कर्मचारी र हजारौं बीमा अभिकर्ता कार्यरत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसबाट रोजगारी सृजनासँगै बीमाबारे जनचेतना पनि वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । यसको फलस्वरूप बीमाको पहुँच वृद्धि भई ११ प्रतिशत पुगेको समितिको विश्वास छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गणना गर्दा कुल जनसङ्ख्याको करीब १४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको समितिको दाबी छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि म्यादी जीवन बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । यसले बीमा कम्पनीको बीमाशुल्क आर्जनमा समेत वृद्धि भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार असारमसान्त सम्ममा उक्त बीमालेखमार्फत झण्डै रू. २ अर्ब बीमाशुल्क आर्जन भएको छ ।
समितिको यसअघिको ५ वर्षे रणनीतिमा विसं २०७५ सम्म बीमा पहुँच २५ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख गरिए तापनि यो सम्भव देखिँदैन । समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यही गतिलाई निरन्तर दिँदै बीमाको पहुँच गुणात्मक रूपमा बढाउने योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी एक घर एक बीमालेख’ भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढेका छौं । अबको केही वर्षमा नै बीमा पहुँच उच्च मात्रामा वृद्धि हुनेछ ।’ आम मानिसले सम्पत्ति, कृषि र जीवनको बीमा गरे भने यसको पहुँच वृद्धि हुन समय नलाग्ने उनको भनाइ छ ।
उनले नयाँ कम्पनी आएपछि बीमाबजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको बताए । उनले भने, ‘कम्पनीको सङ्ख्या र प्रतिस्पर्धा बढेर मात्रा हुँदैन । हामी बीमाको दायरा गुणस्तरीय ढङ्गले बढाउने तयारीमा छौं ।’ त्यसका लागि समितिले जनचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
बीमाको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढे पनि मानिसले क्षमताअनुसारको बीमा गर्ने नगरेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । एक कम्पनीका सीईओले भने, ‘आम मानिसले कतिको बीमा गर्नुपर्छ भनेर बुझेका छैनन् । कसैको १० लाखको बीमा गर्ने क्षमता छ । तर, उसले १ लाखको मात्र बीमा गरेको पाइन्छ ।’
समितिको तथ्याङ्कअनुसार जीवन बीमा कम्पनीले असारमसान्त सम्ममा रू. ३९ अर्ब ८ करोड ७३ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. २२ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कम्पनीको अनिवार्य रूपमा चुक्तापूँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्थाले बीमाक्षेत्रको पूँजीमा पनि सुधार आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
यतिबेला बीमाबजारमा नयाँ र आधुनिक योजनाहरू देखिन थालेका छन् । यसले गर्दा आम मानिस बीमाप्रति आकर्षित हुँदै गएको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । यसप्रकारका वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सके बीमा व्यवसायले अझ फड्को मार्ने कम्पनीहरूको तर्क छ ।
सरकारले मोटर बीमा अनिवार्य गरेपछि त्यसको प्रभाव पनि बढेको छ । निर्जीवन बीमाबजारमा यसको अंश झण्डै ४५ प्रतिशत रहेको छ । तर, जीवन बीमा भने अपेक्षाअनुरूप हुन नसकेको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
जीवन बीमा बाध्यकारी नभएको र विपन्नताका कारण पनि यसको पहुँच नबढेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, आर्थिक अवस्था सबल भएका नागरिकलाई पनि बीमा गराउन नसक्नु कम्पनीहरूको कमजोरी रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
यद्यपि, विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले जनधनको क्षति गरेपछि बीमाप्रति आम मानिसको आर्कषण बढ्दै गएको पाइन्छ । तर, अपेक्षाअनुरूप बीमाप्रति मानिसको आर्कषण नबढेको प्रभु इन्स्योरेन्सका सीईओ सञ्चित वज्राचार्यको भनाइ छ ।